Desire ngobuciko kuvamile kubo bonke abantu, hhayi nje kuphela abadali ochwepheshe: izingane ukuzwa ngezwe, ngakho ukuthuthukisa, futhi abadala kuyasiza ezicezile izinkinga zokuphila kwansuku zonke, luwathathe kusukela grey emhlabeni kwenye, fabulous iyezwakala. Ngokuqinisekile abantu abaningi ayigcini umsebenzi nomkhaya eyodwa kuphela. Othile dancing, umuntu ukucula, futhi ezinye ehhovisi baphuthuma ibhulashi nopende iqonde ekhaya. Nokho, uma okwamanje sazithola ithalenta lokusungula, funa ugqozi lezingane! Izenzo emkhakheni wezobuciko kungaba abaphoqi kanye imisebenzi yezinye izingcweti: nje ubuka lezo zithombe inthanethi ukuthi ngempela 'namathela' wena. Uma ungaqiniseki ngokufanele umphumela, sebenzisa yincwadi yokuzithuthukisa yokufundiswa noma izifundo inthanethi. Ungase uthole akucabangayo noma yini oyifunayo futhi noma yini inqubo: ekumeni, namathafa, namanje Lifes, ayekhulekela; ihluzo, imidwebo, grizal, iyashintsha iyaphupha ibe ... Futhi ungafunda ubuciko, okuyinto beba more and ethandwa ku-intanethi. Iyaqhubeka artah. Kuyini futhi kanjani ukufunda ukudweba ubuciko, oyifundayo kulokhu sihloko.
Igama lihunyushwe kwelesiHeberu elithi ngesiNgisi libhekisela ubuciko imidwebo. Ngempela, ubuciko unganakile kubonakala iphethini elula. Kodwa lokhu akulona iqiniso. Ngokwesibonelo, i-vase ka izimbali. "Lena akuyona art, kodwa umane namanje ukuphila" - Ungase uthi. Futhi ubungalokhu kwesokudla. Uma lokhu vase kuboniswa, isibonelo, kwi ngemuva kwendawo yonke noma isikhungo izingoma ngokuphelele fabulous lapho exutshwe amaphethini noma izitayela ezahlukene, ukuthi enye indaba. Noma, ngokwesibonelo, portrait wentombazanyana - lutho engavamile. Kodwa lapho umculi Kuyathakazelisa ahumushe umfanekiso, unezela zenganekwane, kusetshenzwe kukhompyutha (uma isithombe), lesi sithombe kungenzeka ukuthi kakade ngokuthi ubuciko. Futhi zonke izinhlobo collage, imidwebo ngaphandle umthwalo semantic ... Ngokuvamile, kuningi kakhulu okusafanele sikufunde. Uma unquma ukuthola indlela ukudweba ubuciko, okuhlangenwe nakho kwabo siqu, kufanele wazi ukuthi uzothola isikhathi elithakazelisayo, nobuciko kanye ajabule.
Lapho ukusebenzisa ukudalwa?
Ukwazi indlela ukudweba ubuciko, qiniseka singaba usizo kabi. Uma une indalo emangalisayo, futhi lapho uvala imbobo ku sangemuva, ke kungani kungenjalo ngempela ukwenza kube ingxenye ingaphakathi? izithombe siqu, iphrintwe noma wenza iphepha ezinhle kakhulu usayizi ofanele, ezihlaba izivakashi umxhwele futhi alulaze imvelo. Ngithanda ukubuyekeza ikhabethe lakho? Ngosizo lwezobuchwepheshe banamuhla, manje ungaphrinta art wakho kunoma iyiphi into. Uma wazi indlela ukudweba ubuciko, cishe uzokwazi ukudala isithombe ukuxhumana nomphakathi, noma ukwenza into enhle umuntu ekudaleni art ukuthi kungaba kuye libhekene kakhulu. By the way, nakhu okunye umqondo omuhle ukuba uzazi: ukupenda art ngezwe labo, okungukuthi lokho ziveza athandani kakhulu, idolo, nokunye. Futhi akudingeki baziqambela lutho uma ucelwa ukuba ukhulume ngokwami, ungabonisa kubantu art - futhi konke kuyoba sobala. art Okuningi ingasetshenziswa njengoba, ngokwesibonelo, i-albhamu noma ibhokisi nge minutiae. Okungenzeka ukudweba sibuko yefoni yakho, ithebhulethi, noma ikhompyutha. Noma ukwenza ikholaji ku inkumbulo isikhathi merry futhi ukwethula ezinye. A ubuciko fan ngeke ufakazele ukuthi fan of inkanyezi ethile kweqiniso. Noma kunjalo, ubuciko ukuthuthukisa fantasy, ukuphazamiseka, nika ajabule ... Kodwa ukuze ufunde indlela ongasondela ngayo ubuciko, akunjalo elula. Nokho, zonke singatholwa yinoma ubani.
Ngingalutholaphi ufunde indlela ongasondela ngayo kwezobuciko?
Yiqiniso, kukhona impendulo noma yimuphi umbuzo kuyi-Internet. Kukhona amawebhusayithi amaningi lapho uzofunda indlela ukudweba ubuciko ku-Photoshop noma ipensela. Izinombolo yalolu hlobo libizwa photo zokukhwabanisa, ikholaji. Nokho, imidwebo emasimini ncwadi umsebenzi - "kalyaki-Malaki" - futhi ngendlela ethile kukhona artami. Ngakho ukuthi ngamunye wethu uyajabula ngokuthi umculi, nje ibenze ke. Noma bheka izithombe srisovyvanie - kuyisinyathelo sokuqala ukuba eziphakemeyo lokusungula.
Indlela ukudweba ubuciko ipensela?
Ipensela, upende, amaphastelsi, uyinki, ipeni ... Into esemqoka ukuthi art ekuqaleni ekudonsile kuphela. Yiqiniso, ungakwazi, isibonelo, usike emhlabeni isithombe, bese kutsi ticabange phezu kwakhe. ethandwa kakhulu izibalo Abstraction. Kodwa lokhu akulona amaphetheni weJiyomethri. Babukeka njengezihlahla collage appliques. Kunoma ikuphi, siqale sicabangele Ukwakheka Cabanga ngalokho uzobe anikezelwe ukusebenza. Uma, ukwenza isibonelo, maphakathi ishidi ukudweba intombazane, bese azungeze indawo yakhe, isibonelo, izimbali noma izincwadi, kodwa okungenani amaplanethi noma ama-athomu. Khumbula ukuthi umcabango artah futhi lokusungula kuyinto enkulu ezibaluleke kakhudlwana.
Sifunda indlela ukudweba kwezobuciko kukhompyutha
Okuthile ezifana nalezi zindlela. Kodwa uma wakhetha ukusebenzisa ikhompyutha ke wake wazibuza indlela ukudweba ubuciko ku-Photoshop. Kuyinto eliyinkimbinkimbi kakhulu kunalelo, uthi, ukudala ubuciko ipensela. Mhlawumbe ungase udinge i-tablet ihluzo. Kodwa ungakha okuthile eyabo, usebenzisa izifundo yokusebenza kumhleli isithombe. Kodwa ngesikhathi esifanayo uzobe kulula ukuze udale ikholaji: ingemuva enhle lapho, futhi eziningi izithombe izicelo. Into esemqoka - ilungelo sihlanganise nabo ukukhanya, imibala nokunye. Ungabona izithombe: ngeza izakhi, ushintshe umbala. Kunzima, kodwa uma uzikhandla, ungaba umculi yangempela.
Ukudweba zobuciko umculi eshiya ensimini enkulu ngoba ukuceba. Ungakwazi empeleni ukusebenza azilungiselele ukubhekana nanoma iziphi umcimbi, futhi bebonke kunoma iyiphi ndaba. Ngakho ungakwazi bayakhonza abangani bakho ku-intanethi, isibonelo, nge iholide babo bomsebenzi. By endleleni, uma zobuciko at umdwebo ezingeni libanzi, zama ukubeka izithombe inethiwekhi. Emasayithini ezikhethekile, uyoba bajwayelane abaculi efanayo uzofunda namaqhinga ukuhweba, baqonde futhi ukubaluleka. Zama izinto ezintsha: ubumba, uyinki ingilazi, yemvelo. manje sketchbooks ethandwa kakhulu. Lawa ama-albhamu ka-imidwebo kanye nemidwebo. Dala ubuciko fun yabo, kuyasiza kudlule isikhathi nekujabulisa. Ngo artah kungaba izibalo elula daub, nezamanje okunenjongo - into esemqoka ukuthi uyithandile futhi mhlawumbe waphefumulela othile.
Kuyini gzhel? Gzhel - uhlobo Folk art
Isithombe Plastov "Snow Okokuqala" - incazelo ukwakheka kanye
Omude kunayo yonke owake parallel - Enkabazwe
Russian lapdog anemibala: uhlamvu, izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukuhlukana nomyeni wakhe uma kukhona ingane, futhi siqale ukuphila kabusha
RBC: ukuhlaziya igazi, emagama, isilinganiso kanye nenani. Izinga evamile kwamangqamuzana egazi abomvu (RBC) egazini
Volgograd - Rostov: kanjani lapho?
Kuqondile zezimbali ngezandla zabo